Però: Miaraka Hoan’ny Fandriampahalemana Ao Amin’ireo Tanàna · Global Voices teny Malagasy
Però: Miaraka Hoan'ny Fandriampahalemana Ao Amin'ireo Tanàna
MpanoratraDiego Jaramillo Velarde
Voadika ny 02 Desambra 2013 15:38 GMT
AMASUWA: Tsy hangalatra ianao! ( Quechua “ama”: tsy, sy “suwa” : mangalatra, mandroba ) anisan'ny fitsipi-pitondratenan'ireo Incas.
Nampitombo ny fanafihan-andian-jiolahy voaomana ny fitomboarana ara-toekarena iainan'ireo tanàna Amerikana Latina tahaka an'i Santa Cruz de la Sierra ao Bolivia, Rosario ao Arzantina, ary Trujillo ao Però nandritra ny taompolo farany teo. Izany no tranga mampalahelo hitan'i César Vigo, 26 taona izay te-hirotsaka an-tsehatra amin'ny fisorohana ireo halatra ao an-tanàna peròviana ao Trujillo amin'ny alalan'ny fananganana saritanin'ny tsy fandriampahalemana.
“Ny firoboroboan'ny fivarotana tany aman-trano, ny fisian'ireo orinasa vaovao sy ny fisokafan'ireo magazay lehibe no nahasarika ireo andian-jiolahy ao Trujillo”, hoy i César, izay nilaza fa sahiran-tsaina amin'ny fahitana na famakiana isan'andro ny anaran'ireo olona mamoy ny ainy sy maratra, vokatry ny valifaty na fakàna an-keriny isan-karazany ataon'ireo olona nirahina hanao ratsy. Araka ny ftsikaritr'i César, misy ihany koa ireo fitadiava-tombotsoa tsy ara-drariny mifandraika amin'ny fandrosoan'ny toekarena ao Trujillo, misy ireo milaza fa noho ny fampiasàna ho fanodinana ny vola maloto no mahatonga ny firoboroboan'ny toekarena tampoka. Miteraka tsy fandriampahalemana izany rehetra ary matahotra ny hivoaka ny trano ny olona.
Manoloana izany toe-draharaha izany, nikaroka vahaolana i César sy ireo namany maromaro mba hahafahan'ny olona hivoaka ny trano tsy amin-tahotra sy hisorohana azy ireo tsy ho lasibatry ny asan-jiolahy.
Tamin'ny volana Febroary 2013, namolavola ny “Tetikasa Guachiman” i César nandritra ny fandraisany anjara tamin'ny Conectándonos Perú, nokarakarain'ny Rising Voices tao Cusco. Nandritra izany hetsika izany, notondroin'i César ho olana goavana voalohany ao Però ny tsy fandriampahalemana rehefa avy nanadihady ireo fikarohana sy antotan'isa mikasika ny fandriampahalemana an-tanàndehibe hita tao amin'ny vavahadin-tseraseran'ny Ivotoeram-pirenena momba ny Antontanisa sy ny Informatika ao Però.
Voambolana fampiasa mahazatra ao Però ny Guachimán, avy amin'ny teny anglisy hoe:”watching” (mijery-manara-maso) sy “man” (lehilahy), ka nahatonga azy hoe :”lehilahy manara-maso”. Teo am-panatontosana ny tetikasa Guachimán i César no nahatsikaritra ny sehatra nomerika Amasuwa, habaka noforonina sy anentanan'i Larry Sanchéz ireo lasibatry ny halatra manoratra sy miampanga (manambara) izay mahazo azy. Nanapa-kevitra hiara-hiasa amin'i Larry izy mba hanamafy ity fisantaran'andraikitra ity sy hahazo vokatra goavana kokoa. Notazonina hatrany ny anaran'ny tetikasa hoe Amasuwa.
Angatahina amin'ireo olom-pirenena amin'izao fotoana ny anjara birikiny hitandroana ny fandriampahalemana ao an-tanànan'izy ireo amin'ny fanambarana ny ao amin'ny habaka Amasuwa ny fandikan-dalàna ka faritana tsara ny toerana sy ny ora nitrangan'ny fanafihana ary ny zavatra nangalarina.
Misy karazany roa ny fomba filazana na fanambarana halatra: (fanamarihan'ny mpandika-teny: ahafahana manao fanambarana haingana sy tsotra ny “interface”) Na amin'ny maha-mpisera voasoratra anarana azy ao amin'ny Facebook, na amin'ny fomba tsy mitonona anarana (anonyme). Afaka manambara trangan'halatra hatramin'ny valo isam-bolana ireo mpiserasera efa nisoratra anarana ka mizara izany fiampangana izany ao amin'ny rindrin'ny Facebook-n'izy ireo, afaka manambara halatra hatramin'ny telo isam-bolana kosa farafahabetsany ireo izay te-hijanona tsy mitonona anarana. Amin'ireo fomba roa ireo, misy fetrany ny fanambarana halatra iray isan'andro mba hisorohana izay mety ho fampiasana amin'ny tsy izy ny tolotra sy ny fivezivezen'ny vaovao diso.
Na voasoratra anarana na tsia ny mpiserasera, havoaka tsy ho fantarin'ny olona izay mitsidika ny habaka ny mombamomba izay manao fanambarana. Amin'izany, nandray fepetra ny Amasuwa mba hisorohana izay mety ho valifaty hahazo ireo izay manao fiampangana ny mpangalatra.
Ny tanjon'ny Amasuwa dia ny hampiasa ireo tahiry (ango-kevitra) mba hananganana ny sarintanin'ireo faritra anjakan'ny tsy fandriampahalemana ao Però ary hanaitra ny mponina.
Nilaza ihany koa i César fa rehefa avy mahavita fanambarana ao amin'ny habaka, dia afaka mizara izany ao amin'ny tambajotra sosialy sy mametraka fanehoan-kevitra ny olom-pirenena. Resy lahatra i César fa fitaovana ilaina hananganana tombontsoa iombonana ao anatin'ny sehatra nomerika ny tambajotra sosialy mba hampandrosoana ny asa sahanina sy ahafahana mampitombo ny zavatra azo atao.
Tsy mikendry ny hanangana saritanin'ny tsy fandriampahalemana an-tanàndehibe sy ny lisitr'ireo fandikan-dalàna ihany ny tetikasa, fa ny mba hahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara ihany koa amin'ny alalan'ny fitaovana nomerika sy ny tambajotra sosialy. Mazava fa mitsangana ho azy ny antotanisan'ny fandikan-dalàna ao Però. Hanome fampafantarana hoan'ireo manampahefana ihany koa ny tetikasa mba hahafahany mikaroka fepetra mahomby hiantohana ny fandriampahalemana eny an-tanàndehibe.
Nitantara izay nianarany tena ilaina indrindra nandritra ny fandraisany anjara tamin'ny Conectándonos Perú i César, dia ny fomba fampiasàna ny sehatra virtoaly: datea.pe, izay ahafahana manatontosa sarintany ifandrimbonana noho ny fiarahamiasan'ny olom-pirenena ary koa ny hanentana ho amin'ny fahiratan-tsaina iombonana ao amin'ny fiarahamonina mba hanatsaràna ny fari-piainana.
Tao amin'ny habaka Amasuwa, efa fanambarana fandikan-dalàna madinika 41 sahady no voarakitra. Hita ao ihany koa ny fampiasàna Facebook sy Twitter hahatrarana olona betsaka kokoa.
Miharihary ho an'i César noho izany fa ny fandraisana anjara amin'ny Conectándonos sy ny fahitàna zavatra hafa dia midika fiitatry ny fijeriny an'i Però, sy ny fisian'ny olana isan-karazany. Nampiany ihany koa fa naka ny fepetra ampy hametrahana ny hery tanjaky ny fitaovana nomerika sy ny tambajotra sosialy izay mety hiteraka tombotsoa iombonana izy, hampiroborobo sy hanohànana ireo hetsiky ny olom-pirenena tsy voafetra ara-jeografika.